प्रमओलीको युरोप पर्यटन - Janakpur Today
प्रमओलीको युरोप पर्यटन
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीनियमितविदेश भ्रमणमा रुचिराख्ने नेपालीनेतामध्ये सबैभन्दाशीर्ष स्थानमा पर्दछन ।हालै उनले भियतनाम र क्याम्बोडियाको भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमण “प्याकेज टूर” मा मिलाइएको जस्तो थियो ।पर्यटन ब्यबसायीले तीदुइ देशको प्याकेज मिलाउने गरेका छन । हिजो शनिवारउनी स्वीटजरल्याण्डतिर हिंडेका छन । स्वीटजरल्याण्डको भ्रमण सकेर उनी बेलायतपुग्नेछन । त्यहाँउनको भेट बेलायतकीमहारानीसंग हुने प्रवलसम्भावनाछ ।
प्रमओलीको बेलायत भ्रमण यस्तो बेलामा परेको छ कि त्यहाँकाप्रधानमन्त्री मेले राजिनामादिएकी छिन । प्रम मे बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट अलग गराउने बिबादको निर्णायक टुंगो लगाउनप्रमभएकीथिइन । उनीत्यसमा सफल नभएपछि आँखाबाट दशधारा आँशु बहाउँदै सरकार छाडिन । सरकारसंगै उनले पार्टी सभापतिको पदपनि त्याग गरिन । कामचलाउप्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालीप्रमको स्वागत मेले नै गर्नेछिन । बेलायती सत्ता संक्रमणको समयमा बेलायतपुगेका प्रमओलीसंग त्यहाँको सरकारले के कुरा गर्ला र ? तै पनि, नेपालकाकेहीआशामुखीपत्र–पत्रिकाले उनको भ्रमणले गोर्खा सैनिकसंग सम्बन्धित समस्या समाधानगर्ने आशा राखेकाछन । गोर्खा सैनिक संग सम्बन्धित समस्यात्यति सजिलै समाधानहुनेभएउहिल्यै यो समाधान भै सक्ने थियो । बाँकी, बाटो–घाटो, पुल–नहर लगायतका सहायतानियमित भै हाले ।
प्रमओलीलाई बिश्वकाबिभिन्नचर्चित मानिसहरुकोप्रतिकृति“मैनको पुतला”बनाएर सजाउने म्याडम टुसाद म्युजियमले निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन ?त्यो थाहभएन । म्याडम टुसादका संचालकहरुलाई नेपालकाप्रधानमन्त्रीको चमत्कारिक ब्यक्तित्वकाबारे पक्कै पनिथाहहुनु पर्दछ ।उनी एक त्यस्ताब्यक्तित्वहुन् जो खातकाखातरंगीनसपना देख्नमामाहिर छन । उनीआपूmले देखेका सपनालाई यथार्थमा परिणतगर्ने सपनाकहिल्यै देख्दैन । पहिलो पटक उनको भाषणसुन्ने कुनैपनि नेपालीउनको शब्द चयन र त्यसलाई अभिब्यक्तगर्ने शीप देखेर अभिभूत हुन्छन । हिजो नेपालमा गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको खोजीगर्ने लाई उनी वयलगाडा चढेर अमेरिका नपुगिने उखान सुनाउँथे । बबुरा, अहिले आफैं गणतान्त्रिक ब्यबस्थामाप्रधानमन्त्री छन । प्रमओलीको चमत्कारिक ब्यक्तित्वकाबिभिन्नपक्षकाबारे बेलायती समाजलाई जानकारीदिन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले के कस्तो ब्यबस्थामिलाएको छ ?त्यो सार्वजनिकभएको छैन । सुनेको कुरा, श्री ३ महाराजचन्द्र बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि भजन मण्डलीले “चन्द्र मयूख” पुस्तक लेखेर उनको अभिनन्दन गरेको थियो । प्रमओलीको भ्रमणपछि अनुयायीकार्यकर्ताले “ओलीमयूख”प्रकाशित गरे भने के आश्चर्य ?
बेलायतजानुभन्दापहिले प्रमओली स्वीट्जरल्याण्डको अन्तराष्ट्रिय शहर जेनेभापुग्नेछन ।त्यहाँआइएलओले आयोजना गरेको सभामाभागलिनेछन । प्रमओलीको पूर्ववर्ती पार्टी एमालेका मजदूर नेता र आइएलओका अधिकारीबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेकोछ । त्यसैले प्रमओलीको स्वीटजरल्याण्ड बसाई सुविधाजनक र आनन्ददायीहुनेछ । पक्कै पनि, प्रमओलीयहाँबाट जेनेभाजाने अरु नेताहरु जस्तो त्यहाँ रहेको नेपालीमिसनको सानो घरमा कोचिएर बस्नचाहने छैनन । जेनेभानिवासीकुनै नेपालीको घरमा घुस्रिने त झन कुरै आएन । होटलमा नै बस्नु पर्यो । प्रधानमन्त्रीजस्तो मानिस लरतरो होटलमा बस्ने कुरा आएन । उसै पनि स्वीटजरल्याण्ड भाउ बेसाहकामामिलामा सस्तो देश होइन । त्यसमापनि जेनेभा संयुक्त राष्ट्रसंघको युरोपीय हेडक्वार्टर नै भयो । युरोपको न्यूयोर्क । भनेपछि, त्यो ठाउँ कतिमहँगो होला? सहजअन्दाजगर्न सकिन्छ । कुरा अर्को पनि छ । ओमेगा, रोलेक्स, राडो लगायतदर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका घडीहरुको शहर पनिहोे जेनेभा । जेनेभाको मूलबजारमा पुगी सकेपछि प्रमओली र म्याडम प्रमले आफनो लोभ संवरणगर्न गाह«ैछ । बाँकी कुरा पाठकहरुले स्वयं अन्दाजलगाउन सक्नेछन ।
प्रमओलीको स्वीटजरल्याण्ड भ्रमण पहिलो होइन । पहिलो पटक उनी डाभोस पुगेकाथिएआर्थिक कार्यक्रममाभागलिन । त्यो कार्यक्रमब्यक्तिगत रुपमाप्रमओलीकालागिकतिफाइदाजनकभयो र देशकालागिकति?यसको लेखाजोखा गर्नु त पर्ने हो । तर, बिरालाको घाँटीमा घण्टी कसले झुण्ड्याउने ? नेपाल सरकारका सर्व शक्तिमानप्रमुखसंगत्यस्तो लेखाजोखाखोज्ने आँट कसले गर्ने ? जे भएपनि, पदबाट बिदा लिएपछि आपूmले सरकार प्रमुखका रुपमा घुमेका देशहरुको सूचिमा स्वीटजरल्याण्ड पर्ने भयो भनेर मनको सन्तोष पक्कै भएको हुनुपर्छ प्रमओलीलाई ।
स्वीट्जरल्याण्डबाट बेलायतपुगेपछि प्रमओलीको यो सिजनको असली भ्रमण शुरु हुनेछ । जनताले उनकादेखाउने र चपाउने दुबैथरि दाँत देख्न पाउने छन । अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिजभनेका त त्यस्तै उस्तै हो । बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायले यो पटक प्रमओलीको उखानकारिता र तुक्काकारिताको स्वादप्रत्यक्षपाउनेछन ।
प्रमओलीले पाँचबर्षपछि नेपालमा रेल चल्ने, बिदेशबाट आएकायात्रुहरु निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थलमाओर्लिने र द्रूतमार्गबाट घण्टा भरमा नै काठमाडौं पुगिने दिब्यजानकारी दिए कसैले पनिआश्चर्य मान्नु पर्दैन ।यस्तो पक्कै हुन्छ । तर, अहिले होइन, त्यसकालागिदुइदशककुर्नु पर्ला । बेलायत बसेका नेपालीले मेलाम्ची र बुढी गण्डकीको कुरा उठाउलान । तामाकोशीकिनलक्ष्यभन्दा ढिलो भएकोछ ? यो प्रश्नपनिगर्लान । प्रश्नको उत्तर दिनप्रमओलीलाई कसैले भेटदैन । जहाँ बसेपनि देशकाप्रधानमन्त्रीसंग कुरागर्न पाउनुलाई नेपालीजनताआफनो अहोभाग्य सम्झिन्छन । यो भाग्यउनीहरुले यूरोपमापाउँदैछन ।
बेलायतपछि प्रधानमन्त्रीओलीफ्रान्स भ्रमणमा जाँदैछन । लामो समयदेखि नेपालकाप्रधानमन्त्रीले फ्रान्सको भ्रमण नगरेकाले यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले “हाइप्रोफाइल” भ्रमण भनेको छ । फ्रान्समाप्रधानमन्त्रीकाअन्यत्रकाभन्दा फरक एजेण्डा छैनन । स्वीटजरल्याण्ड होस वा बेलायतअथवाफ्रान्स, उद्देश्य पर्यटन हो । प्रधानमन्त्रीपर्यटनमा छन । राम्रै हो । तर, प्रश्नअलि घोचिलो र पेचिलो छ । के प्रमओलीकायी भ्रमणहरुको कुनै राजकीयऔचित्य छ ? सम्बन्ध सुधार र बिस्तारका नाममाप्रधानमन्त्री र विभिन्न नेताहरुको बिदेश भ्रमण बिलाशभन्दा बढी केहीहोइन। यस्ताअर्थ न बर्थका भ्रमणमा जानुभन्दा देशमा बसेर मौलिकचिन्तनगर्नु देशभक्तिहो । अहिलेको बिश्व राजनीतिमा नेपालको भूमिकाव्दिविधाग्रस्तछ । नेपालचीनको बेल्ट एण्ड रोड नीतिमापनि साझेदारी जनाउँछ । अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्तमहासागरमा पनि सहमति जनाउँछ । यो प्रमओलीकै शासनकालमाभएको छ । यतिभनेपछि भ्रमणका बारे केहीभनि रहनु पर्ला र ?
जनकपुर टुडे २०७६ जेष्ठ २६ गते-PDF
जीवन बचाऊ संबन्धि तिन दिने तालिम सुरु